Palestina: Atrikasa manome hery ireo mpitoraka blaogy any Gaza sy Cisjordanie · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Jolay 2010 3:22 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Nederlands, македонски, Italiano, বাংলা, English
Nihaona isanandro nandritra ny herinandro ireo mpitoraka blaogy am-polony sy ireo olona hafa liana amin'ny fitorahana blaogy any Gaza, ary herinandro iray hafa any Cisjordanie, mba hianatra mafy araka izay tratry ny herin'izy ireo mikasika ireo fomba ahafahan'ireo teknika vaovao amin'ny aterineto manampy ny mponina mba hahenoana ny feon'izy ireo.
Ireo foto-kevitra ao anatin'izany: mampiasa ireo fitaovana amin'ny aterineto ho an'ny fiarovana sy ny fahalalahana miteny, miaraka amin'ireo ohatra amin'izany azo maneran-tany, ny fiarovana ary ny fiainana manokan'ny tena rehefa mitoraka blaogy sy mampiasa ny aterineto, ary ny lahatsoratra mifampiditra.
reo mpitoraka blaogy Nour El Khoudary sy Nazek AbuRahma nanoratra lahatsoratra iombonana ao amin'ny AlJazeeraTalk mikasika ny iray amin'ireo atrikasa nataon'i Sami tany Gaza :
Hitanay tao amin'izany atrikasa izany izay nantsoina hoe “Manandratra ny fitorahana blaogy sy ny fanaovan-gazetin'ny olon-tsotra ho amin'ny fiovana ara-tsosialy” izay naharitra andro roa tao an-tanànan'i Gaza, tao anatin'izany dia nampitombo fahalalana ireo mpitoraka blaogy tamina fanazavana maro i Ben Gharbia, toro-làlana sy toro-hevitra, ho fanampin'ireo traikefa avo lenta nolazainy. Namporisihina hitoraka blaogy amin'ny fomba mavitrika sy mandaitra ireo mpitoraka blaogy.
Atrikasa nataon'i Sami Ben Gharbia
Abu El Sharif, mpitoraka blaogy iray hafa any Gaza, nanoratra tao amin'ny blaoginy :
Andro vitsy lasa izay, nanam-bitana handray anjara tamin'ny atrikasa mikasika ny fitorahana blaogy antsoina hoe “Mitoraka blaogy ho an'ny Fiarovana” niaraka tamin'ny mpitoraka blaogy Toniziana Sami Ben Gharbia aho. Mahery ny fahitana fa misy ny porofo amin'izao fa afaka mitondra fiovana avy amin'ny zavatra soratanao ianao, izay midika fa raha mampiasa ireo fitaovana anananao ireo ianao, amin'ny fomba marina, tena azo ataonao tokoa avy eo ny manova zavatra hitanao isanandro kanefa tsy tianao, izay hitan'ny olon-kafa kanefa tsy hanaovany na inona na inona!
Araka ny notenenin'i Sami,raha namintina ny zava-nisy any Gaza: “Mba hamintinako ny traikefako sy ireo dinidinika niarahako tamin'ireo mponina liana amin'ny kolotsaina any Gaza, ny fahirano tena mampidi-doza indrindra dia ny fahirano ara-tsaina. Tsy mila sakafo na sokolà na fanafody i Gaza, fa mila olona manana saina matsilo, olona ampy fahaizana ary boky.”
Taorian'ny niafaran'ireo atrikasa, dia nisy fakàna video ny resadresaka nisy teo amin'ireo mpitoraka blaogy tany Gaza sy tany Cisjordanie natao. Ola Anan dia iray tamin'ireo mpitoraka blaogy nandray anjara tany Gaza, ary taty aoriana dia nanoratra izy:
Tena feno zava-tsoa sy nahafinaritra ilay fifanakalozan-dresaka. Indraindray tsy manaiky izahay, ary indraindray manaiky..
Niresaka mikasika ny traikefanay mitoraka blaogy izahay…ary nampitaha ny tenanay tamin'ireo Arabo mpitoraka blaogy efa nialoha làlana anay izahay..
Ola namarana tamin'ny teniny:
Afaka maminavina ny fahatsapako sy ny hafaliako tamin'iny andro iny ianao… Efa ho efa-taona izao ny blaogiko, ary izao no fotoana voalohany nahatsapako fa manana ny lanjany na koa manana fahafahana hanana ny lanjany eto an-tany ny zavatra ataoko.